Igumbi lokulala eli-2 negumbi lokugezela eli-2 lilala 6 (imibhede egoqwayo emi-2)
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Nazneen
PRIVATE 2 bedroom Apartment with 2 bathrooms. Ilala ngaphezulu kuka-4+2 emibhedeni esongwayo ukuze ikwazi ukulala 6. Inesethi egcwele yendlu- Ikhishi (Isitofu segesi namabhodwe namapani, izitsha zokupheka namapuleti, izinkomishi njll).Igumbi Lokuphumula eline-TV - Igumbi lokudlela. (Itafula lezihlalo ezingu-6 nezihlalo ezi-3). Umshini wokuwasha & nefenisha ye-Balcony - ukuze izivakashi zijabulele indawo enhle. Imizuzu emi-5 ukuya eDolobheni, ePaki Yezingane nasesibhedlela. Imizuzu engu-15 ukusuka eNadi International Airport kanye nemizuzu engaba ngu-40 ukusuka eDenarau Resorts & Port Denarau namanye amahhotela amakhulu.
Ungakhathali ukubuka okungu-360 Deg kwezibonisi zezakhiwo kanye neBalcony ibonakala ivulela esibhakabhakeni. Indawo enhle yokuphumula.
Le ndawo inobude obunokubukwa koLwandle, Izintaba nezintaba. Ibamba umuzwa wasekhaya endaweni kodwa nokho ibanga elingamaminithi angu-5 lapho ungaba khona edolobheni. ILautoka ibizwa nangokuthi iDolobha Loshukela - njengoba iyindawo yamasimu omoba. Ngezikhathi zonyaka umoba - izivakashi zingase zibone izitimela zikamoba zithutha ushukela ezigayweni.
Ngangokunokwenzeka ngizozithola nge-viber uma ngisepulazini nasezingcingweni lapho ngingekho - ukuze ngiphendule yonke imibuzo futhi ngiziphendule mathupha ekungeneni kokuhlola noma ezicingweni phakathi nesikhathi sokuhlala kwezihambeli. Ngikulangazelela ukuhlangana nezivakashi zami, njengoba zithanda ukwazi nge-Marau View Heights kanye ne-Fiji.
Ngangokunokwenzeka ngizozithola nge-viber uma ngisepulazini nasezingcingweni lapho ngingekho - ukuze ngiphendule yonke imibuzo futhi ngiziphendule mathupha ekungeneni kokuhlola nom…
UNazneen Ungumbungazi ovelele